ဒိုမီနို em emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
ဒိုမီနို။ ဒိုမီနိုဂိမ်းသည်အလွန်ဖြစ်သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျော်ကြားနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လူများကကစားခဲ့သည်။ မိသားစုအစည်းအဝေးများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ပါတီများ၊ အသားကင်များ၊ စနေ၊
ဒိုမီနို အသုံးပြုတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် စတုဂံပုံစံများကိုအပိုင်းပိုင်းယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုပေးသောအထူနှင့်ပြည့်စုံ တစ် ဦး parallelepiped ၏ပုံသဏ္.ာန်, မျက်နှာများ၏တ ဦး တည်းကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးများကိုညွှန်ပြအစက်ဖြင့်မှတ်သားသည်။
ဒီဝေါဟာရကိုဒီဂိမ်းကိုဖွင့်ထားသည့်အပိုင်းများကိုတစ် ဦး ချင်းစီသတ်မှတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ နာမတော်သည်လက်တင်စကားအသုံးအနှုန်းမှဖြစ်နိုင်သည် "အခမဲ့ဒိုမိန်း" ("the Lord the Lord") ဥရောပပြိုင်ပွဲ ၀ င်များသည်ပွဲစဉ်တွင်အောင်ပွဲခံရန်ပြောကြားခဲ့သည်။
အပိုင်းများ: နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်အတူ 28 အပိုင်းပိုင်း0မှ6အထိ။
ပါဝင်သူတစ် ဦး လျှင်အပိုင်းပိုင်းပါဝင်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ၇ ခု။
ဂိမ်းရည်ရွယ်ချက်အမှတ် ၅၀ လုပ်ပါ။
ဒိုမီနိုအပိုင်းအစ- ၎င်းသည်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါသောအပိုင်းအစတစ်ခုစီရှိပြီးနံပါတ်တစ်ခုပါရှိသည် (ဥပမာ - အပိုင်း ၂-၅၊ ၆-၆၊ ၀-၁) ။
အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုချရမလဲ။အနည်းဆုံးတူညီသောနံပါတ်တစ်ခုရှိသည် (ဥပမာ - ၂-၅ နှင့် ၅-၆) ။
ဒီဂိမ်းကိုဘယ်သူနိုင်သလဲ: ကစားသမားတစ် ဦး သည်မိမိလက်ထဲတွင်ပြတ်လပ်သွားသောအရာအားလုံးကိုတပ်ဆင်ပြီးသည့်အခါ။
အပိုင်းအစများကိုစားပွဲပေါ်တွင် "shuffled" လုပ်ပြီးကစားသူတိုင်းကရယူသည် ကစားရန်7အပိုင်းပိုင်း။ ဂိမ်းကိုစတင်သူသည်ကစားသမားဖြစ်သည် အပိုင်းအစ6-6🂓ရှိပါတယ်။ စားပွဲ၏အလယ်တွင်ဤအပိုင်းကိုနေရာချခြင်းဖြင့်ဂိမ်းကိုစတင်ပါ။ ထိုအရပ်မှ လက်ယာရစ်နာရီကစား.
ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏အပိုင်းအစအချို့ကိုဂိမ်း၏အဆုံးတွင်အပိုင်းအစများနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ကြိုးစားရမည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်အပိုင်းအစတစ်ခုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လျှင်၊ အလှည့်လာမယ့်ကစားသမားကူးဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကစားသမားတွင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ကိုက်ညီမှုမရှိပါက၊ အလှည့်ဖြတ်ရမယ်မည်သည့်အပိုင်းပိုင်းကစားခြင်းမရှိဘဲ။
El ဂိမ်းအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ် အခြေအနေနှစ်ခုမှာ: ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဂိမ်းကိုအနိုင်တိုက်သည့်အခါသို့မဟုတ်ဂိမ်းသော့ခတ်သောအခါ။ ဤအချိန်သည်ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်သည့်ယခင်ဂိမ်းမှပထမဆုံးကစားသမား၏ညာဘက်မှကစားသမားဖြစ်လိမ့်မည်။
ဂိမ်းသော့ခတ်လျှင်: တစ်ခုချင်းစီကို pair တစုံအားဖြင့်ရရှိသောအားလုံးအမှတ်ရေတွက်နေကြသည်။
အနိမ့်ဆုံးရမှတ်နှင့်အတူ pair တစုံအနိုင်ရရှိသူဖြစ်ပြီးဆန့်ကျင် pair တစုံ၏ရမှတ်အားလုံးယူ။ ဒီအမှတ်အရေအတွက်မှာလည်စည်းရှိလျှင်ဂိမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားသောစုံတွဲသည်ရှုံးနိမ့်ပြီးအနိုင်ရသူသည်ဤစုံတွဲမှရမှတ်အားလုံးကိုရယူသည်။ အနိုင်ရတဲ့စုံတွဲရဲ့ရမှတ်တွေကိုစုဆောင်းပြီးထိုသူနှစ်ယောက်သည်အမှတ် ၅၀ သို့ရောက်သောအခါဂိမ်းအဆုံးသတ်သည်။
အပိုင်းအစတစ်ခုစီ၏အမှတ်တန်ဖိုးသည်အပိုင်းအစ၏အဆုံးသတ်နှစ်ခု၏တန်ဖိုးများ၏ပေါင်းလဒ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့ကြောင့် 0-0 အပိုင်း0တန်ဖိုး၊ အပိုင်း 3-4 သည် ၇ မှတ်၊ အပိုင်း ၆-၆ သည် ၁၂ မှတ်နှင့်ညီသည်။
ဂိမ်းတွင်ပြိုင်ပွဲဝင်အတွဲ (၂) ခုပါ ၀ င်သောလေး ဦး ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့သည်အခြားနေရာများတွင်နေရာယူရမည်။
အများဆုံးလက်ခံထားသောသီအိုရီမှာဘီစီ ၂၄၃ မှ ၁၈၁ အကြားတရုတ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် Hung Ming အမည်ရှိစစ်သားတစ် ဦး ကဖန်တီးခဲ့သည်။
ထိုအချိန်ကအပိုင်းအစများသည်တိုင်းပြည်၏နောက်ထပ်တီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်ကစားကွင်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည် "အစက်အပြောက်များ" .
အနောက်ဘက်မှာ ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိဒိုမီနိုများအကြောင်းမှတ်တမ်းမရှိပါကပေါ်လာသောအခါ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီပိုမိုတိကျစွာ၏တရားရုံးများတွင် ဗင်းနစ်နှင့်နေပယ်, ဂိမ်းဝါသနာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ရှိရာ။
နောက်မှတ်တိုင်တစ်ခုကအင်္ဂလန်ကိုစတင်ခဲ့သည် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်ပြင်သစ်အကျဉ်းသားများ
ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဗဟုသုတပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ထိုဂိမ်းကိုစပိန်နိုင်ငံသို့သယ်ဆောင်လာသည့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကိုသာကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။
သေးငယ်ပြားချပ်ချပ်နှင့်စတုဂံပိတ်ပင်တားဆီးမှု, ဒိုမီနိုများကိုသစ်၊ အရိုး၊ ကျောက်၊ ပလပ်စတစ်စသည့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပိုင်းအစတစ်ခုစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုမျက်နှာတစ်လိုင်းသို့မဟုတ်ထိပ်တစ်ခုဖြင့်နှစ်ထပ်ခွဲခြားထားတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချက်အလက်များတွင်သုံးသောအစက်အပြောက်များနှင့်အတူမှတ်သားထားပြီး၊ ကျန်ရင်ပြင်အနည်းငယ် မှလွဲ၍ ကျန်။ အဖြူရောင်ထဲမှာ
ဂိမ်း၏ဥရောပဗားရှင်းတွင်တရုတ်၌ထက်ပိုသောအပိုင်းအစခုနစ်ခုရှိပြီးစုစုပေါင်း ၂၈ လုံးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စံပြဒိုမီနိုများတွင်အများဆုံးအရေအတွက်ရှိသောကျောက်သည် ၆-၆ ဖြစ်သည်🂓တစ်ခါတစ်ရံ ၉-၉ အထိ (၅၈ ပိုင်း) နှင့် ၁၂-၁၂ အထိ (၉၁ ပိုင်းအထိ) ပိုကြီးသည့်အစုံများကိုအသုံးပြုသည်။
မြောက်အမေရိကမှအနူအီတီသည်အပိုင်းပိုင်း ၁၄၈ ခုပါရှိသောအစုံများ သုံး၍ ဒိုမီနိုပုံစံမျိုးဖြင့်ကစားသည်။
တရုတ်ရဲ့ဂိမ်းဖန်တီးမှုဟာအဆုံးမရှိဘူးလို့ထင်ရပါတယ် ဒိုမီနိုသည်ဆင်တူသော်လည်းပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းအတွက်အခြေခံနှင့်စံနမူနာဖြစ်သည်။ Mahjong .
အားသာချက်များနှင့်စတင်ခြင်းသည်၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်နားလည်ရန်၊ လွယ်ကူစွာစုစည်းရန်နှင့်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်များပြားလှသောနည်းဗျူဟာများဖြင့်ကစားသူများအားစိတ်ကျေနပ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဤကြီးမားသောအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်သိပ္ပံနည်းကျအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ ဥပမာ၊ အငယ်ဆုံးများအတွက်ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ လူကြီးများအတွက်မဟာဗျူဟာကျသောယုတ္တိဗေဒနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်မှတ်ဉာဏ်တို့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဒါဟာလက်တွေ့ကျဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဖြောင့်ဖြောင့်မျက်နှာပြင်နှင့်အနည်းဆုံးကစားသမားနှစ် ဦး ဖြင့်ဂိမ်းစတင်ရန်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်။
သို့သော်အားသာချက်များစွာရှိသောဂိမ်းပင်လျှင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအရာအချို့ရှိသည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်ခြင်း ကစားသမားလေးယောက်သာရှိသည်အနည်းဆုံးအားကစားအများစုတွင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အုပ်စုကြီးတစ်ခုကိုဖျော်ဖြေရန်ခက်ခဲသည်
နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဂိမ်းကို set up ဖို့ "finesse"အများဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများသို့မဟုတ်ပင်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများကိုလိုပဲ။ အပိုင်းအစများကိုမည်သည့်ပုံစံမျိုးမဆိုတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါဟာစားပွဲပေါ်ရုတ်တရက်ပျက်ကျမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်းပိုင်းတကယ်တော့သူတို့ဟာအနည်းဆုံးသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အဆင်မပြေပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသေးငယ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာအစက်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာအမြင်အာရုံ (သို့) သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတောင်ဆုံးရှုံးသွားတာပါ။
ပျောက်ဆုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများ